अहिले विश्वव्यापीरूपमा नै कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको आतंक फैलिएको छ । त्यसको अहिलेसम्म कुनै औषधि पनि फेला परेको छैन । त्यसले गर्दा त्यसको खतराको गम्भीरता अरू बढेर गएको छ । तर त्यो खतराबाट तर्सनुपर्ने कुन...
मसाललाई नेकपा(नेकपा) वा काङ्ग्रेस बन्ने खतराबाट कसरी बचाउने ?
आज हाम्रो पार्टी नेकपा (नेकपा) वा नेपाली कांगेस जस्तो बनेको छैन भने त्यसको कारण यो हो कि हामीले पार्टीभित्र पार्टीको अनुशासन कायम राख्नका लागि दशकौंदेखि लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएका छौं । हामीले त्यसप्रकारको सङ्घर्ष...
सरकारका काण्डैकाण्डमाथि मोहनविक्रम सिंहको डण्डा
विभिन्न काण्डहरुमा मुछिएको वर्तमान सरकार पछिल्लोपटक भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मुछिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । ...
नेपालमा किन मौलाउँदैछ पीत पत्रकारिता ?
सरकारले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारहरूमाथि कडा सजायको प्रावधानहरू समेतको हामीले विरोध गरेका थियौँ र हाम्रो त्यो मत अहिले पनि कायम छ । त...
राजाकै सत्तामा कालापानीमा भारतीय सेना
भारतद्वारा प्रकाशित नयाँ नक्साबाट भारतको साम्राज्यवादी चरित्र नाङ्गो रूपमा अगाडि आएको छ । उक्त नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेतलाई भारतमा भएको देखाइएको छ । त्यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खुल्ला प्रकार...
असोज २९, २०७६, बुधबार
पत्रपत्रिका (कान्तिपुर, असोज २७ गते)मा प्रकाशित समाचारअनुसार चीनका राष्ट्रपति सीले नेकपाका नेताहरूसित भेट हुँदा यो कुरामा जोड दिएका थिए ः ‘जनताको मन जित्ने काम गरेर मात्र लामो समयसम्म सत्तामा रहन सकिन्छ...